DAAWO SAWIRRO: Weerar lagu dilay 10 Ruux oo ka dhacay Magaalada Toronto. – Xeernews24
DAAWO SAWIRRO: Weerar lagu dilay 10 Ruux oo ka dhacay Magaalada Toronto.
24. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
10 qof ayaa dhimatay 25 kalana waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan kaddib markii nin u muuqanayo inuu si ulakac ah gaadhi u jiidhsiiyay dad marayay hareeraha waddo aad u mashquul badan oo ku taal magaalada Toronto ee waddanka Canada, booliska ayaa sidaasi sheegay.
Darwalka waday gaadhiga dadka la jiidhsiiyay ayaa waxa uu isaga baxsaday goobta, hasayeeshee waxaa lagu qabtay meel aan sidaasi goobta uga fogeyn xabsiga ayaana loo taxaabay.
Ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Alek Minassian, waa 25-sano jira kasoo jeeda magaalada Richmond Hil, waxaana xabsiga u taxaabay ciidamada oo baadhitaan ku haya.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegaya in aanay weli ogaan sababta qofkaasi laga shakisan yahay ku dhalisay inuu weerrarkan gaysto. Qof ka mid ah dadkii goobtaasi joogay ayaa sheegay in gaadhigu uu ku socday xawaare aad u sarreeya.
Wasiirka Badbadaada Dadweynaha ee dalka Canada, Ralph Goodale, ayaa dhacdada ku tilmaamay inay tahay mid khatar ah hasayeeshee waxa uu diiday amma ka gaabsaday inuu ka hadlo waxa sababay arrintan.
Kuxigeenka taliyaha booliska Toronto, Peter Yuen, ayaa sheegay in boolisku uu baadhaayo darawalkii waday gaadhiga, waxa uuna codsaday in dadkii goobjoogayaasha ah ay la soo xidhiidhaan.
Weerarka ayaa ka dhacday dhabaha Yonge iyo wadada Finch saacaddu markii ay aheyd 1:30 duhurnimo xilliga Canada, ilaa 2 km ayuuna weerrarku ka dhacay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Toronto-weerar.jpg 458 634 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-24 08:02:322018-04-24 08:02:32DAAWO SAWIRRO: Weerar lagu dilay 10 Ruux oo ka dhacay Magaalada Toronto.
DEG DEG Kacdoonki reer Sitti oo galaaftay M/Xigeenkii C/Xakiin Cumar Cigaal... BARNAAMIJ KU SAABSAN SIDII LOO QEYBIYEY RAADHINKII BULSHADA IYO MASUULINTA REER...